थाहा खबर: सांसदका पीएलाई चाहिँदैन शैक्षिक योग्यता, नागरिकताको फोटोकपीका भरमा शाखा अधिकृत
सांसदका पीएलाई चाहिँदैन शैक्षिक योग्यता, नागरिकताको फोटोकपीका भरमा शाखा अधिकृत
काठमाडौं : सांसदका पीएलाई शाखा अधिकृतसरहको सुविधा दिने संसद् सचिवालयले उनीहरूबाट नागरिकताको फोटोकपी मात्र लिन्छ। सांसदका आफन्त नै भए पनि कम्तीमा शाखा अधिकृतसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने हो । तर, अहिले जागिर खाइरहेका पीएहरूको शैक्षिक योग्यता कति हो? संसदमा कतै अभिलेख छैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, सांसदले आफ्नो पीएको नागरिकताको फोटोकपी मात्रै संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैका आधारमा सांसदको खातामा पीएको तलब पठाइन्छ। तलब सुविधासम्बन्धी संसद्को ऐनअनुसार सांसदका पीएले शाखा अधिकृतसरहको पारिश्रमिक पाउँछन्। तर, सांसदले श्रीमान्, श्रीमती, सालासाली र भाञ्जाभाञ्जीलगायतलाई नियुक्त गरेका छन् ।
‘सांसदहरूले आफ्नो पर्सनल असिस्टेन्ट आफैँ नियुक्त गर्नुहुन्छ। कति योग्यताको पीए आफूलाई चाहिने हो त्यो उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँहरू आफैँले पिएलाई दिएको नियुक्तिपत्र, पिएको नागरिकताको फोटोकपी र सांसदको बैंक अकाउन्ट सचिवालयले माग गर्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा‍. रोजनाथ पाण्डेले भने ।